Shir ka furmaya Garoowe iyo Musharixiinta oo ka qeybgalaya | KEYDMEDIA ONLINE
Shir ka furmaya Garoowe iyo Musharixiinta oo ka qeybgalaya
Shirkan ayaa yimid kadib markii Galmudug iyo Puntland ay maalmoho kahor sheegeen inay dhex dhexaadinayaan dhinacyada isku khilaafsan doorashadda dalka.
GAROOWE, Soomaaliya - Waxaa la filayaa in magaaladda Garoowe ay gaareen saacadaha soo socda qaar kamid ah Musharixiinta mucaaradka, oo lagu wado inay ka qeybgalaan Shir looga hadlayo khilaafka doorashadda Soomaaliya, kaaso ka duwan midka ay soo abaabushay Machadka Heritage.
Musharixiinta waxay sidoo kale u tagayaan Puntland arrimo ololahooda doorashadda la xiriira, waxayna safaro ku bixin doonaan magaalooyinka waaweyn, sida Boosaaso, Garoowe, Qardho iyo kuwa kale.
Madaxda Galmudug iyo Puntland Qoor Qoor iyo Deni ayaa Khamiistii kulan ay ku yeesheen Gaalkacyo ku sheegay inay dhex dhexaadinayaan muranka u dhaxeeya Musharxiinta Mucaaradka iyo Farmaajo si xal loogu helo khilaafka doorashadda.
Lama oga inuu Farmaajo ka qeybgali doono, laakiin waxay wararku sheegayaan inuu u diri doono Ra'iisul Wasaare Rooble, oo dhawaan booqasho ku tagey Galmudug iyo Puntland, islamarkaana lasoo kulmay Deni iyo Qoor Qoor.
Khilaafka doorashadda waxa uu u muuqdaa mid xalkisia adag yahay, maadaama shuruudaha horyaalla Farmaajo ay culus yihiin inuu fuliyo. Axmed Madoobe ayaa dalbanaya in Ciidanka DF laga saaro Gedo, iyadoo Musharixiinta ku baaqeen in la kala diri gudiyadda doorashooyinka.
0 Comments Topics: doorashadda 2020 garowe puntland